Vanhu Vanokwira Panguva Yekurwara neKufema Kunogadzira
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose » Vanhu Vanokwira Panguva Yekurwara neKufema Kunogadzira
African Tourism Bhodhi • Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Kuputsa Kufamba Nhau • Hurumende Nhau • Health News • nhau • vanhu • Kuvakazve • Trending Now • USA Kuputsa Nhau • Akasiyana Nhau
Bill Gates ane meseji kune nyika.
Dhata nyowani inoratidza pasi rose rakakwidzwa kudzivirira dzakaipisisa-kesi kuitika; nzvimbo dzinotariswa dzinoda kudyara kwenguva yakareba kuitira kuona kudzoka kwakaringana uye kufambira mberi kunofambira mberi kuenda kuGlobal Goals, inozivikanwa seUN Sustainable Development Goals.
Bill & Melinda Gates Foundation nhasi yazivisa yaro yechishanu yegore yeGoalkeepers Report, iine dhatabhesi yakagadziridzwa yepasi rose inoratidza kukanganisa kwehutachiona mukufambira mberi kuenda kuUnited Nations Sustainable Development Goals (Global Goals).
Chirevo chegore rino, chakanyorwa pamwe naBill Gates naMelinda French Gates, masachigaro evaBill & Melinda Gates Foundation, zvinoratidza kuti mutsauko wakakonzerwa neCOVID-19 unoramba uripo, uye avo vakanyanya kutambudzwa nedenda iri ndivo kunonoka kupora.
Nekuda kwe COVID-19, vanhu vanosvika mamirioni makumi matatu nemasere vakasundirwa muhurombo hwakanyanya muna 31 zvichienzaniswa na 2020. Uye nepo 2019% yehupfumi hwemberi huchawanazve pre-denda pamunhu pamari yegore rinotevera, chetatu chete chepasi- nepakati -mari dzeupfumi dzinotarisirwa kuita saizvozvo.
Neraki, pakati pekuparadza uku, nyika yakawedzera kusimudzira zvimwe zvezviitiko zvakaipisisa. Mugore rapfuura Goalkeepers Report, iyo Institute for Health Metrics uye Kuongorora (IHME) yakafanotaura kudonha kwemazana gumi nemana muzana muzana muvharidziro yepasirese yepasi rose - ichinyatso kudzima makore makumi maviri nemashanu ekufambira mberi mumavhiki makumi maviri nemashanu. Ongororo nyowani kubva kuIHME inoratidza kuti kuderera, kuchiri kusingagamuchirwe, kwaingova hafu yezvaitarisirwa.
Mumushumo, ma-co-chair anosimbisa "inoshamisa mweya" iyo yaingo goneka nekuda kwekudyidzana kwepasirese, kuzvipira, uye kudyara kwemakumi emakore. Ivo vanobvuma kuti kudzivisa zviitiko zvakaipisisa-zvinorumbidzwa, asi vanoona kuti hazvina kukwana. Kuti vave nechokwadi chekudzora zvine mwero kubva padenda, vanodaidzira kudyara kwenguva yakareba muhutano nehupfumi - senge izvo zvakakonzera kukurumidza kukurumidza kwemushonga weECVID-19 - kukurudzira kufambisa basa nekudzosa nyika munzira sangana neGlobal Goals.
"[Gore rapfuura] rakasimbisa kutenda kwedu kuti budiriro inogoneka asi isingadzivisike," nyora ma co-chair. "Kana tikakwanisa kuwedzera pane zvakanaka pane zvatakaona mumwedzi gumi nesere yapfuura, tinogona kuisa denda shure kwedu uye nekukurumidza kuwedzera budiriro mukugadzirisa nyaya dzakakosha senge hutano, nzara, uye shanduko yemamiriro ekunze."
Chirevo ichi chinoratidza kukanganisika kwezvehupfumi kwakakonzerwa nedenda iri kuvakadzi pasi rose. Munyika dzine mari dzakaderera neyakaenzana zvakafanana, vakadzi vanga vakanyanya kurohwa kupfuura varume nekuderera kwehupfumi hwenyika uko kwakakonzerwa nedenda.
"Vakadzi vanosangana nezvipingaidzo mumativi ese epasi, zvichivasiya vari panyatwa nedenda iri," akadaro Melinda French Gates. "Nekuisa mari kuvakadzi izvozvi uye kugadzirisa kusaenzana uku, hurumende dzinogona kukurudzira kudzikama zvakaenzana dzichisimbisa hupfumi hwadzo kumatambudziko emangwana. Hazvisi izvo chete zvakanaka zvekuita - asi zano rehungwaru iro richabatsira munhu wese. ”
Chirevo ichi chinoratidzawo izvo zvinonzi "chishamiso" chemishonga yekudzivirira yeCOVID-19 yaive mhedzisiro yemakumi emakore ekudyara, marongero, uye kudyidzana kwakagadza zvivakwa, tarenda, uye masisitimu anodiwa kuzviisa nekukurumidza. Zvisinei, masisitimu aibvumidza kuvandudzwa kusingaenzaniswi uye kutumirwa kwejekiseni re COVID-19 aripo kunyanya munyika dzakapfuma, uye semhedzisiro, nyika haina kubatsirwa zvakaenzana.
"Kushaikwa kwekuwana zvakaenzana majekiseni eECVID-19 idambudziko rehutano hwevanhu," akadaro Bill Gates. “Takatarisana nenjodzi chaiyo yekuti mune ramangwana, nyika dzakapfuma nenharaunda vachatanga kurapa COVID-19 sechimwe chirwere chehurombo. Hatigone kukanda denda shure kwedu kusvikira munhu wese, zvisinei nekwavanogara, awana mishonga yekudzivirira. ”
Kupfuura makumi masere muzana emishonga yekudzivirira COVID-80 yakapihwa munyika dzepamusoro- uye dzepamusoro-dzepakati kusvika ikozvino, vamwe vachichengetedza zvakapetwa kaviri kana katatu nhamba inodiwa kuti vakwanise kuvhara zvinowedzera; isingasviki 19% yemadhosi yakapihwa munyika dzine mari shoma. Kupfuurirazve, COVID-1 yekudzivirira yekuwana yakayananiswa zvine simba nenzvimbo kune mushonga weR & D uye kugona kwekugadzira. Kunyangwe Africa iri pamusha kune 19% yevagari vepasi rese, semuenzaniso, ine isingasviki 17% yenyika yekudzivirira majekiseni kugona.
Pakupedzisira, chirevo chinodaidzira kuti nyika iise mari muR & D, zvivakwa, uye hunyanzvi munzvimbo dziri padhuze nevanhu vanomira kuti vabatsirwe.
"Tinofanira kuisa mari kune vanobatsirana vemuno kusimbisa kugona kwevanotsvagadzira nevagadziri munyika dzinotambira mari shoma kuti vagadzire majekiseni nemishonga yavanoda," akadaro CEO weGates Foundation, Mark Suzman. “Nzira chete yekuti tigadzirise matambudziko edu akakura ndewekurwira hunyanzvi uye tarenda revanhu pasi rese.
Munzira dzakawanda kwazvo, denda rakaedza tariro yedu. Asi haina kuiparadza.
Pasi pemamiriro ezvinhu akaomesesa kufungidzira, takaona hunyanzvi hwekuvandudza.
Isu takaona kukurumidza kwatinogona kuchinja maitiro edu, sevanhu uye sevanhu, kana mamiriro ezvinhu achichida.
Uye nhasi, isu tinogona zvakare kutaura kuti vanhu munzvimbo dzese dzenyika vanga vachikwidza kumusoro kuchengetedza budiriro iriko ratakaita kwemakumi emakore — kana zvasvika kuma SDGs, zvirinani, kukanganiswa kweiyo inoenderera COVID-19 denda zvinogona kunge zvakatoipisisa.
Rave riri gore rakasimbisa kutenda kwedu kuti budiriro inogoneka asi isingadzivisike. Iko kuedza kwatinoisa muzvinhu zvakanyanya. Uye, sevanhu vasingashiviriri tariro, tinotenda kuti tinogona kutanga kudzidza kubva mukubudirira uye kukundikana kwedenda kusvika ikozvino. Kana isu tichigona kuwedzera pane zvakanaka pane izvo zvatakaona iyi yapfuura 18 mwedzi, isu tinogona pakupedzisira kuisa denda shure kwedu uye zvakare zvakare kumhanyisa budiriro mukugadzirisa zvinhu zvakakosha senge hutano, nzara, uye shanduko yemamiriro ekunze.
Ndedzipi dzimwe mhinduro dzinobatsira munhangemutange yekupedza denda iri? Tarisa Bill Gates uye vatatu veGweta vanoratidzira maturusi ari kushandiswa kurwisa COVID.
Iyo Dhata Inotaurira Inoshamisa Nyaya
Mugore rapfuura, zvave zvisingaite kufuratira mutsauko wakanyanya kwete chete mukuti ndiani akarwara uye ndiani akafa — asiwo mune aifanira kuenda kubasa, ndiani aigona kushanda pamba, uye ndiani akarasikirwa nemabasa zvachose. Kusaenzana kwehutano ndekwekare senzira dzehutano pachadzo, asi zvakatora denda repasirese kuti zviyeuchidze nyika zvine simba nemhedzisiro yavo.
Mamirioni Akawanda muhurombo Hwakanyanya
Kune vazhinji, kukanganiswa kwehupfumi nedenda iri kuri kuramba kuchiwedzera uye kuchitsungirira. Tinoziva kuti tingaite kunge vatumwa vasingakwanise panyaya iyi - tiri vaviri vevanhu vane rombo rakanaka panyika. Uye denda raita kuti zvinyatsojeka. Vanhu vakaita sesu vakatsungirira denda iri muchimiro chakanaka, nepo avo vari panjodzi dzakanyanya kurohwa uye vangangove vanononoka kupora. Vakawedzera vanhu vane mamirioni makumi matatu nematatu pasirese vakasundirwa muhurombo hwakanyanya nekuda kwe COVID-31. Kunyangwe varume vari 19% vangangofa kubva kuCOVID-70, vakadzi vanoramba vachikanganiswa zvisingaenzaniswi nehupfumi pamwe nemagariro echirwere ichi: Gore rino, mabasa evakadzi pasi rose anotarisirwa kuramba ari mamirioni gumi nematanhatu emabasa pazasi pegore ra19 - nepo varume basa rinotarisirwa kupora kune pre-denda mitengo.
Kunyangwe zvakasiyana zvichityisidzira kudzikisira kufambira mberi kwatakaita, humwe hupfumi hwatanga kudzoka, huchiunza kuvhurwa kwemabhizinesi nekugadzirwa kwemabasa. Asi kudzoreredza hakuna kuenzana pakati- uye kunyange mukati- penyika. Negore rinotevera, semuenzaniso, 90% yehupfumi hwemberi hunotarisirwa kuti huwanezve pre-denda pamunhu wega wega mari, nepo chikamu chetatu chehupfumi hwepasi nepakati hunotarisirwa kuita zvakafanana. Basa rekudzora hurombo riri kudzikira - uye zvinoreva kuti vanhu vangangosvika mamirioni mazana manomwe, ruzhinji munyika dziri pakati nepakati, vanotarisirwa kuramba vari muhurombo hwakanyanya muna 700.
Kukura Mapako muDzidzo
Tiri kuona yakafanana nyaya kana totaura zvedzidzo. Denda risati rasvika, vana vapfumbamwe pagumi munyika dzine mari shoma vaive vatotadza kuverenga uye kunzwisisa chinyorwa chakakosha, zvichienzaniswa nemumwe chete muvana gumi munyika dzine mari zhinji.
Humbowo humbowo hunoratidza kuti kurasikirwa kwekudzidza kuchave kwakakura pakati pemapoka akasarudzika. Kukura kwekusiyana kwedzidzo kwakawanikwa munyika dzakapfuma, futi. MuUnited States, semuenzaniso, kurasikirwa kwekudzidza pakati peVatema neLatino vadzidzi vegiredhi rechitatu kwaive, paavhareji, zvakapetwa zvakapetwa zvevachena uye veAsia American vadzidzi. Uye kurasikirwa kwekudzidza pakati pevatatu vegiredhi kubva kuzvikoro zvehurombo hwakakwira zvakapetwa katatu yeavo vezera ravo muzvikoro zvehurombo hwakaderera.
Vazhinji Vana Vanoshaya Mishonga
Zvichakadaro, huwandu hwese hwevacheche hwekudzivirira nhomba hwaderera kusvika pamatanho akapedzisira kuonekwa muna 2005. Pakati pekutanga kwedenda uye pakatanga kuita mabasa ehutano muhafu yepiri ya2020, vana vanopfuura mamirioni makumi matatu pasirese vakapotsa majekiseni avo - ndiwo mamirioni gumi. zvakanyanya nekuda kwedenda. Zvinogoneka kuti vazhinji veava vana havazombobata madosi.
Asi pano, iyo data yakatishamisa: Gore rakapfuura, isu takanga tataura kuti iyo Institute for Health Metrics uye Kuongorora kwaifungidzira kuti kufukidzwa kwejekiseni kwaizodonhedza gumi nemana muzana pasi rose muna 14, ingadai yakave makore makumi maviri nemashanu ekufambira mberi pasi pemvura. Asi zvichibva pane dhata razvino, zvinoita sekunge kudonha chaiko kwekuvharirwa kwekudzivirira - kunyangwe hazvo zvaiparadza - yaive hafu chete iyoyo.
Sezvatakaramba tichizungunusa data, zvakazova pachena kuti ichi chaisave chinhu chinokatyamadza: Pane akawanda makiyi ekuvandudza mabudiro, nyika yakakwira pamusoro pegore rapfuura kudzivisa zvimwe zvezviitiko zvakaipisisa.
Tora malaria, semuenzaniso, iyo yakagara iri imwe yezvirwere zvisingaenzaniswi pasi rose: 90% yematambudziko emarariya anowanikwa muAfrica. Gore rakapera, World Health Organisation yakafungidzira kukanganiswa kwakanyanya kune kwakakosha kwekudzivirira malaria iyo ingadai yakagadzirisa budiriro shure makore gumi- uye zvichizoguma nekuwedzera kufa kwe10 kubva kuchirwere chinodzivirirwa. Kufungidzira uku kwakakurudzira nyika zhinji kutora matanho ekuona kuti mambure emubhedha aigovaniswa uye kuyedzwa uye mishonga yemalaria inoramba iripo. Benin, uko marariya iri chikonzero chikuru cherufu, yakatowana nzira yekuvandudza mukati medenda: Vakagadzira nzira nyowani yekuparadzira mishonga yekuuraya zvipembenene, vachiwana mambure anosvika mamirioni manomwe nezviuru mudzimba munyika Mazuva makumi maviri.
Cotonou, Benin Mufananidzo unofadza naJanick Folly / AFP kuburikidza neGetty Images
Vakafanirwa nekutenda kwenyika.
Ehezve, huwandu hwakazara hwekukanganiswa nedenda kuma SDGs zvinotora makore kuti unzwisise zvizere, sezvo data rakawanda uye zvirinani richiwanikwa. Uye iyi data haideredze kutambura chaiko kwakakonzerwa nedenda kune vanhu kwese-kure nazvo. Asi chokwadi chekuti isu tinogona kunongedza kune zvakanaka zviratidzo mukati kamwe-mu-chizvarwa denda repasi rose chinoshamisa. Neruoko rumwe rwakasungirwa kumashure kwavo, vanhu vasingaverengeke, masangano, uye nyika vakapfuura nepamusoro pekuvandudza, kugadzirisa, uye kuvaka masisitimu akasimba, uye nekuda kweizvozvo, vanofanirwa nerutendo rwenyika.